Sotheby's ဆောင်း ဦး ရာသီလေလံပွဲ - HIGH JEWELLERY DREAM
အရှေ့အနောက်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်အခါ။ Sotheby's သည်အရေးပါသောအာရှအမေရိကန်ရတနာစုဆောင်းမှုကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကတော့ Cartier ကလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းတဲ့ Art Deco လက်ကောက်ဖြစ်သည်။
လာမည့်ဆောင်း ဦး ရာသီလေလံပွဲမှပေါ်လွင်ချက်များသည်ထူးခြားသောရတနာများနှင့်ထူးခြားသောကျောက်မျက်များကိုဖော်ပြသည်။
လာမည့်အပတ် Sotheby ရဲ့ နယူးယောက်နှင့်ဂျီနီဗာနှစ်ခုလုံးတွင်လေလံတင်မည့်အရေးပါသောအာရှအမေရိကန်စုဆောင်းမှုမှထူးခြားသောရတနာများကိုတင်ဆက်လိမ့်မည်။
အထူးသဖြင့် Cartier၊ Van Cleef & Arpels နှင့် Harry Winston တို့ကိုနှစ်သက်ကြောင်းပြသသည့်ထင်ရှားသောအမျိုးသမီးတစ် ဦး စုဆောင်းထားသည့်စုဆောင်းမှုတစ်ခု။
ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ensemble အပိုင်းပိုင်း - တစ်ခုထက်ပိုသောဂန္ထဝင်နှင့်တရားဝင်စတိုင်နှင့်သူမနေ့စဉ်ဝတ်စားဆင်ယင်လေ့ရှိသည့်ဖက်ရှင် ဦး တည်ချက်အပိုင်းအစများ။
စုဆောင်းမှု၏အဓိကအပိုင်းမှာထူးခြားသော Art Deco နီလာနှင့်စိန်လက်ကောက်ဖြစ်သည်။ Cartier က ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင်ဖန်တီးခဲ့သည်။ လက်ကောက်သည် ၉.၂၇ နှင့် ၈.၆၀ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသော ၂၇.၀၇ ကာရက်အလေးချိန်ရှိသောမြန်မာ့ Sapphire ပါရှိသည်။
Art Deco Sapphire နှင့်စိန်လက်ကောက်, Cartier, 1927. Sotheby's
လက်ကောက်၏အဓိကကျောက်မျက်သည်အလွန်ထူးခြားသည်။ တော်ဝင်အပြာရောင်အရောင် (အဝါရောင်အများဆုံး) တွင်၎င်းသည်ထူးကဲပြတ်သားမှုနှင့်ပြည့်စုံသော cabochon ပုံသဏ္shapeာန်ကိုဖော်ပြသည်။ Sotheby ၏ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရနီလာအတွက်ဤပုံသဏ္choiceာန်သည်ရွေးချယ်သောဒီဇိုင်နာ၏ရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ "ဒီအရွယ်အစားနှင့်အရည်အသွေးကျောက်မျက်ရတနာရှားပါးမှုစဉ်းစား, ဆယ်စုနှစ်အဖြစ်မှတ်နိုင်သည့်တစ်ခု".
Art Deco Sapphire နှင့်စိန်လက်ကောက်, Cartier, 1927. ဗဟို cabochon-cut sapphire ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ Sotheby's
Cartac's Eastern motif ကိုစူးစမ်းလေ့လာသည့်အချိန်သည် ၁၉၂၇ ခုနှစ်တွင်လက်ကောက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ Cabochon Sapphire သည်သစ်တော်သီးပုံသဏ္cutာန်ဖြတ်ထားသောစိန်များနှင့်အတူ Moghul စတိုင်ဖြစ်သည်။ Cartier ၏ထူးခြားသောသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုလက်ခံသည်။ အဆင့်ဆင့်ဖြတ်တောက်ထားသောစိန်နှင့်နီလာကျောက်မျက်ကြိုးများသည်လက်တွန်း၏အခြေခံဖြစ်သည်။ Art Deco ဒီဇိုင်း။
ဒီအရေးကြီးတဲ့စုဆောင်းမှုမှာရတနာရတနာတွေသာမကတရုတ်အနုပညာလက်ရာတွေပါ ၀ င်ပြီးအာရှရက်သတ္တပတ်အတွင်း Sotheby's New York မှာလေလံတင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်ဤစုဆောင်းမှုကို Sotheby ၏စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်နယူးယောက်ရှိ Fine Jewel များရောင်းချခြင်းနှင့်နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နှင့် ၁၃ ရက်တို့တွင်ဂျီနီဗာရှိခမ်းနားသောကျောက်မျက်ရတနာများနှင့် Noble Jewel များအကြားခွဲဝေလိမ့်မည်။
ဤအံ့ဖွယ်ရတနာနှင့်ကျောက်မျက်ရတနာစုဆောင်းမှုကိုစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ရွှင်လန်းမှုနှစ်မျိုးလုံးဖြင့်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစုစည်းထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုသူတို့ပိုင်ရှင်များကတန်ဖိုးထားပြီးမကြာခဏ ၀ တ်ဆင်သည်ကိုငါတို့သိသည်။ Cartier Art Deco လက်ကောက်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။ ၎င်း၏ဗဟိုကျောက်တုံးသည်အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့်အရောင်ရှိသောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောမြန်မာနီလာနီလာဖြစ်သည်။ ဤကဲ့သို့သောအချိန်ကုန်နေသောအပိုင်းအစများသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
Sotheby ၏လက် ၀ တ်ရတနာဌာနဥက္ကChairman္ဌ David Bennet
ဤအစုဆောင်းမှုတွင်စုဆောင်းသူများသည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်က Art Deco နီလာနှင့်စိန်လက်ကောက်များကို Cartier မှထပ်မံလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Art Deco Sapphire နှင့် Diamond Brooch-clip, Cartier, 1937. Sotheby's
ဤလက်ကမ်းစာစောင်၏ဆွဲဆောင်မှုသည် Cartier အလွန်လူသိများသောအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးလက်မှုလက်ရာ၌သာမကဘဲ၎င်းကိုပြသသည့်အချက်ပင်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Maison ရဲ့ ဒီဇိုင်းဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် - သန့်ရှင်းသောလိုင်းများအတွက်သုတေသနနှင့်စက်ခေတ်နှင့်ကိုက်ညီသောဗိသုကာပုံစံများကိုပိုမိုအသုံးပြုခြင်းသည်ပန်ကာကဲ့သို့သော ပို၍ ပထဝီအနေအထားကိုရယူရန်ဖြစ်သည်။
ဂျီနီဗာတွင်ဗန်ကလိဖ်နှင့် Arpels နှင့်ကာတီယာကလက်မှတ်ရေးထိုးသည် -
ပတ္တမြားနှင့်စိန်လက်ကောက်များနှင့်နားကပ်များ၊ 'Serti Mystérieux', Van Cleef & Arpels ။ Sotheby's
နီလာနှင့်စိန်လက်စွပ်, Cartier ။ ၁၇.၄၈ ကာရက်ရှိမြန်မာနီလာနှင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ စိန်လက်စွပ်, Cartier ။ ၁၁.၂၀ ကာရက်ရှိ D အရောင်စိန်နှင့်ပြုလုပ်မည်။ Sotheby's
ဒီရွေးချယ်မှုကိုလာမည့်စက်တင်ဘာ ၂၅ ရက်၊ နယူးယောက်ရှိ Fine Jewels အရောင်းပြပွဲတွင်လေလံတင်မှာဖြစ်ပြီး Cartier မှကျောက်မျက်ရတနာနှင့်စိန်အစုံလိုက်မှ ဦး ဆောင်မှာဖြစ်ပြီး ၇၂.၇၀ ကာရက်ရှိသစ်တော်သီးပုံသဏ္aquာန် aquamarine ကိုဆိုင်းငံ့ထားသည့်လည်ဆွဲလည်းပါဝင်သည်။ aquamarine လက်စွပ်နှင့်ရောင်စုံကျောက်ပုတီးတစ်စုံ။
ကျောက်မျက်ရတနာနှင့် Diamond Suite၊ Cartier၊ ပြင်သစ်။ Sotheby's
နယူးယောက် Fine Jewel ရောင်းချမှုမှပေါ်လွင်ချက်များမှာ -
စိန် Cuff- လက်ကောက်။ Sotheby's
ယဉ်ကျေးမှုပုလဲနှင့်စိန် Earclips ၏пара, Harry Winston ။ Sotheby's
Diamond Earclips၊ ပြင်သစ် Cartier၊ Sotheby's
နယူးယောက်: 6-10 စက်တင်ဘာ & 20-24 စက်တင်ဘာလ
Los Angeles မြို့: အောက်တိုဘာ 16-18
ဟောင်ကောင်: အောက်တိုဘာ 3-6
လန်ဒန်: 17-19 အောက်တိုဘာလ
ဟောင်ကောင်: အောက်တိုဘာ 21-22
စင်္ကာပူ: အောက်တိုဘာ ၂၇-၂၈
ထိုင်ပေ: ၂၄-၂၅ အောက်တိုဘာ
နယူးယောက်: 1-2 နိုဝင်ဘာလ
ဂျီနီဗာ: နိုဝင်ဘာ 9-12
Tags:art deco • လလေံပှဲ • Cartier • မြင့်မားသောရတနာ
မှတ်ချက်0ခုSotheby ၏ဆောင်း ဦး လေလံပွဲများ"